जिन्दगी एक यात्रा
बिहिवार, चैत्र २७, २०७६ ०६:२०:४१
शनिवार, मंसिर २८, २०७६ News Missile
जिन्दगीका पौने तीन दर्जन बर्षहरु पार गरिसक्दा पनि जिन्दगीलाई अझै पढ्दैछु बुझ्दैछु तथापि जिन्दगीको छेउटुप्पो फेला पार्न सक्या छैन। जिन्दगीको चौराहमा उभिएर चारैतिर हेरेँ भने आउनेहरू आइरहेका जानेहरू गइरहेका दृश्य आँखामा लिएर उभिने एउटा म मात्र भएझैं लाग्यो जिन्दगीमा । चटारो अनि हतारले भरिएको मेरो जिन्दगी ।
देख्थें मानिसहरु हतारमै दौडिरहेका थिए जान होस् या आउन । यस्तो लाग्छ मलाई, म एउटा सालिक राख्न बनाईएको रित्तो पिलर हुँ जहाँ सालिक राखिने कुनै टुङ्गो छैन । हो म त्यहि रित्तो अविचल उभिएको छु बीच चौराहामा। मान्छेले हिड्न बनाईएका धेरै पहिलादेखि हिँड्न थालेका अहिले रङ्ग उडेर उदास लाग्दो देखिएको मेरो जिन्दगी जस्तै ती सडकहरू तिनको यात्रा कहाँसम्म हो थाहा छैन मेरो जीवन यात्रा जस्तै अविचलित अविराम र पटक पटक फेरिएका गन्तब्यहरु जहाँ पुग्न मेरा पाईलाहरु निरन्तर अघिबढी रहेका छन्।
मेरा पाईलाभन्दा अघि-अघि निरन्तर आफ्नो अग्रता लिईरहेका यी सडकका किनारमा बेलगाम बेढङ्गले उभिएको म। न म पीपल, न कल्पवृक्ष जो कहिल्यै मर्दैनन्। तर म पटक-पटक मर्दै गएँ । कति पटक पतझडको रुख भएँ उराठ लाग्दो दिक्दार लाग्दो कति पटक आफूलाई सम्हाल्दै गएँ । सायद अव म आफूलाई सम्हाल्न सक्छु भन्ने उत्साह उर्जा र ढाडस मिलेको छ आफ्नै मन मुटु र खुशीबाट।
अचेल जब-जब एकान्तमा हुन्छु, मलाई लाग्छ के जिन्दगी सपना अनि बिम्बै बिम्ब मात्रै हो त! के जिन्दगीलाई चिन्न मलाई अझै युगौंयुग लाग्ने नै भो त । के मैले जिन्दगीमा चिन्न बाँकी अरू थुप्रै कुराहरु छन् ! के यो सत्य होईन र? सायद नदीनालाहरू, डाँडाकाँडा र पहाडहरू, पाखा पखेरा र प्रकृतिका लोभ लाग्दा अनेकौं दृश्यहरु नबुझी बुझिँदैन जिन्दगी! मैले सधैं आफूलाई एक्लै हिँडाउन खोजेको त होइन तथापि अचेल मेरो यात्रामा साथ दिने दायाँ बायाँ त मेरो मन मुटु र खुशी मेरो छाँया बनेर साथ छन् तब त केहि गर्ने जाँगर छ हौसला छ।
दुनियाँले यो भिडसँग म दौडिन सक्दिनँ भनेकै हुन्। अरूको गति र चालसँग चल्न सक्दिनँ भनेकै हुन्। सायद मेरो धिमी चालयुक्त जीवनलाई हेरेर यो लख काट्नु अन्यथा नै भने होईन भन्नेहरु पनि छन् मेरो वरिपरि। हिँड्दा हिँड्दै जब म थाकेर पछि छोडिन खोज्थें तब मेरो मनमुटु र मेरो उत्साहले मलाई मेरो हातमा समात्दै घिच्याउँदै अघि बढ्न हौस्याउँथ्यो र लखेट्थ्यो दौडाउँदै।
जिन्दगीको यात्रामा कहिले भीडको बीचमा परियो त कहिले ठेलमठेल कोलाहलयुक्त भीडमा निस्सासियो। गाम वेंसी गर्दा उकालीमा दम फुलेर एकछिन चौतारीमा सुस्ताउँदा उनको यादले नसताएको पनि होईन । कहिले गोधुली साँझ शितलताले त कहिले भोक र तिर्खाले दौडायो।
उभिन नदिईकन पछाडिबाट घचेटिरहने विगतको पञ्जातिर मुन्टो फर्काएर हेर्न कहिल्यै पाइन मैले। र अहिले लाग्दैछ पछाडि फर्केर हेर्न पनि नपरोस्। अघि बढ्दै जाओस् पाईलाहरु केवल तिम्रो साथ र सहारामा । बस उहि मेरो मन मुटु र जीवनको खुशीको सहारामा।
प्रकाशित मिति: शनिवार, मंसिर २८, २०७६, ०९:१२:००
तर यस्तो नभए हुन्थ्यो
अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत दिद्यार्थीद्वारा शुल्क फिर्ता माग
आइतवार, चैत्र १६, २०७६ News Missile
शनिवार, चैत्र ८, २०७६ प्रज्वल घिमिरे
कोरोनाभाइरस विरुद्धकाे पूर्ण सतर्कतामा नागार्जुन नगरपालिका बुधवार, चैत्र २६, २०७६ -->
गाउँपालिकाले दीर्घरोगीलाई नि:शुल्क औषधी उपलब्ध गराउने
खेलकुदको वर्तमान अवस्था र योजनाका विषयमाथि भिडियो कन्फरेन्स
कामुक हिरोइन शेर्लिन चोपडाको हट अवतार
कोरोनाभाइरस रोकथाम कोषमा २ अर्ब जम्मा
कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि महालक्ष्मीको ५० लाख आर्थिक सहयोग
मापदण्ड अनुसार राहत दिन र तस्बीर नलिन निर्देशन
आफ्ना दुःख भुलेर कोरोना भाइरसविरुद्धको सन्देश प्रवाहमा
महामारी शुरु भएको वुहान सहरमा लकडाउन हटाइयो
कोरोनाभाइरस विरुद्धकाे पूर्ण सतर्कतामा नागार्जुन नगरपालिका News Missile
सहकारी दिवस र अकल्पनीय कोरोना त्रास सानुराजा पुरी (विशेष सम्वाददाता)
लकडाउनले रक्तदानमा उब्जाएकाे प्रश्न News Missile
चुनावी घोषणा-पत्रमा लेखिएका र बोलेकाेभन्दा बढी गर्न सफलता : वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ शनिवार, चैत्र ८, २०७६
उदयपुरमा प्रमुख नगदेबाली बन्दै तेजपत्ता मगलवार, फाल्गुन ६, २०७६
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको निर्वाचनमा नेतृत्वको चर्चा मगलवार, मंसिर २४, २०७६
कोरोनाभाइरस रोकथाम कोषमा २ अर्ब जम्मा बुधवार, चैत्र २६, २०७६
हातमा आइफोन बाेक्नेदेखि औँठी र घाँटीमा सिक्री लाउनेहरु राहत लाइनमा मगलवार, चैत्र २५, २०७६
नागार्जुन नगरपालिकामा पहिलो चरणको राहत आइतवार, चैत्र २३, २०७६
Contact no: 9851111471